Text Symbols: squared, kpakpando, akụ, edenyere na obi ederede akara
há nhata, kpakpando, akụ, edenyere na obi ederede akara
Text akara bụ mfe agwa. Iji ederede akara na texting, akparị ụka, Facebook na ndị ọzọ na mobile ngwa ọdịnala na-ọzọ mgbe n'oge. Detuo karịa 1000+ ederede akara ebe a. Text akara akwado android na apple IOS ngwaọrụ, windo, Mac na ndị ọzọ. Dị nnọọ idetuo na mado n'ebe ọ bụla ị na-amasị. Categories nke ederede akara gụnyere kpakpando, obi ederede akara, há nhata akara, mgbakọ na mwepụ, aro, edenyere, music na ọtụtụ ndị ọzọ. Ụfọdụ online game-akwado maka agwa aha eji ederede akara. Ị nwere ike iji ederede akara icho mma gị Instagram nkọwa na-eme ka gị na-elekọta mmadụ media profaịlụ ọzọ pụrụ iche na nkecha. Enwere ọzọ akara dị.
⇨ akụ Symbols
Ⓐ Mkpụrụ Okwu Symbols
☑ Akọrọ Symbol
♞ Chess & kaadị Symbols
◉ gburugburu Symbols
❏ nhata Symbol
⌬ ụzụ Symbols
[Mata + nri click] ma ọ bụ [aka + jide] idetuo.
edenyere & Copyright Symbols
mkpụrụ Okwu Symbols
ọzọ Akara ókwú
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H m J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ʌ ɑ: æ ə ɜ: ɪ i: ɒ ɔ: ʊ ị: aɪ aʊ eɪ oʊ ɔɪ eə f g d b ɪə ʊə h j k l m n p r s t ʃ tʃ v w z ʒ θ D dʒ
Chess & kaadị Symbols
♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ Celsius ọ ؂ ≠ ≭
ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ☇ ☈ ☄ ℃ ℉ Celsius
☹ ☺ ☻ ☿ ♀ ♂ 〠 Uz Tsu ㋡ 웃 유 ụ ụ ت Shi Tsu ㋛ ☠ ☃ 〲 〴 ϡ ٿ ⍢ ⍣ ⍤ ⍥ ⍨ ⍩ ὃ ὕ ὣ Ѷ Ӫ ӫ
há nhata Symbol
Nka na ụzụ Symbols